Ezigbo omume iji zụlite sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma mepee: Documentation | Site na Linux
Linux Post Wụnye | | Na-atụ aro
Akwụkwọ: Ezigbo omume iji zụlite sọftụwia na-emeghe n'efu
La akwụkwọ bụ ma bụrụ akụkụ dị mkpa nke usoro okike na atumatu nke ọrụ mmadụ niile, na ndị ọzọ na teknụzụ, ọkachasị na mpaghara Mmepe software.
El ebumnuche nke akwụkwọ niile ọ ga-abụ Ya kụziere ndị ọzọ (ndị ọrụ, ndị nchịkwa, ndị nlekọta, ma ọ bụ ndị mmepe ndị ọzọ), ndị na-amachaghị ngwaahịa (koodu, ngwa ma ọ bụ sistemụ), olee otu esi kee ya nhazi ya, oru ya ọ bụrụgodị na ọ ga-ekwe mee, ihe mere e ji kee ya na otú e si hazie ya na otú e si arụ ọrụ.
Ọzọkwa, na kpọmkwem ikpe nke Free Software akwụkwọ dị mkpa, ebe ọ na-enye ohere iji zuru ezu na-ekwe nkwa na ịnyefe ihe ọmụma na ike dị mkpa maka afọ ojuju mmezu nke 4 nnwere onwe kwalitere ya, nke bụ:
0: Nnwere onwe ịme ihe omume ahụ otú ịchọrọ, maka nzube ọ bụla.
1: Nnwere onwe ịnweta ma mụọ mmemme, ma gbanwee ma ọ bụ gbanwee ya maka uru gị.
2: Nnwere onwe nke ịkekọrịta ma ọ bụ kesaa otu iji gbasaa otu na / ma ọ bụ nyere ndị ọzọ aka.
3: Nnwere onwe iji kesaa ụdị nke nsụgharị gị agbanweela na ndị ọzọ.
Ezigbo akwụkwọ na-eme ka o kwe omume na ngwaahịa ahụ mepụtara:
A na-eji ya eme ihe n'ụzọ ziri ezi, a na-akụzikwa ya ma na-amụ ya n'ụzọ dị mfe.
Ghọta ndị niile chọrọ ịgbanwe ya iji meziwanye ma ọ bụ megharịa ya.
Na -ekere ma nata site na ntụkwasị obi karịa, n'etiti ndị nwere ike ịmara na ndị bịara abịa.
Nwee oke mma n'etiti ọha.
1 Ezigbo omume: Akwụkwọ
1.1 Isi ihe
1.2 Omume dị mma na akwụkwọ na faịlụ ederede README
1.2.1 Ebumnuche faịlụ README ka akwadoro
Ezigbo omume: Akwụkwọ
N'ihe banyere Mmepe nke Free Software na Open Source, n'ozuzu, isi ọrụ nke akwụkwọ ikwu na ngwaahịa imewe, bụ ndị na-ma ọ bụ ga-, na maka mmezi nke otu. Na enweghị ezigbo akwụkwọ ma ọ bụ enweghị akwụkwọ, naanị ihe ọzọ ga-agbanwe bụ ịchọpụta ya ozugbo, iji nweta ya ghọta atụmatụ ya na ọrụ ya.
Emeghi ezigbo akwukwo mgbe obula imepe Free Software, Open Source ma ọ bụ ụdị sọftụwia ọ bụla ọzọ, bụ izigara ndị nnata ya (ndị ọrụ, ndị nchịkwa, ndị nlekọta, ma ọ bụ ndị mmepe ndị ọzọ) ịchọta ụzọ site n'oké ọhịa na-enweghị maapụ ma ọ bụ compass.
Mepụta ezigbo akwụkwọ maka nke ọ bụla Free Software, Mepee Isi Iyi ọ bakwara uru, ebe ọ bụ ezie na akwukwo nwere ugwoNtinye ego, ọ bụrụ na emezuru ya nke ọma, kwesịrị ya. N'ihi na, ụwa nke software juputara na akuko banyere koodu ihe nketa mmemme ochie ma ọ bụ nke ugbu a, ngwa ma ọ bụ sistemụ, nke naanị mmadụ ole na ole na-anwa anwa imetụ aka, n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-aghọta. Ndị mmemme na-elekwasị anya na ịmepụta koodu ma ghara idekọ ya nke ọma na kpamkpam. Ma nke a ga-edozi.
Omume dị mma na akwụkwọ na faịlụ ederede README
N'ihe banyere Free Software na Open Source, a na-egbochikarị ihe ederede na faịlụ ederede, mgbe ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ obere ìgwè nke mmemme ma ọ bụ obodo mepụtara ya. Ma, rue mgbe ịmepụta a mfe akwụkwọ iji mfe ederede ederede README.md (ma ọ bụ .txt) ị nwere ike ịnwe nke gị omume kacha mma, ndụmọdụ ma ọ bụ ihe nduzi bara uru nke okike iji weta ihe ọmụma zuru oke na nke zuru oke maka ihe ndị ọzọ.
Maka edemede anyị, anyị ewerela Omume oma tụụrụ ime ma gosipụta ya "Koodu maka mmepe Initiative" na Bank Inter-American Development Bank, nke na nchikota na-agwa anyi na ezigbo akwukwo ndi dabeere na a ederede ederede README.md (ma ọ bụ .txt) A gha ahaziri ya dị ka ndị a:
Ebumnuche faịlụ README ka akwadoro
Nkọwa na gburugburu: Ngalaba ebe ị gha akọwapụta arụmọrụ, gburugburu ebe e mepụtara ya na nsogbu mmepe ọ nyere aka dozie.
Ntuziaka onye ọrụ: Ngalaba ebe ntuziaka nye onye ọrụ njedebe banyere otu esi amalite iji ngwa dijitalụ.
Nwụnye ndu: Ngalaba ebe ntuziaka ntuziaka ka ijigha ma hazie ngwá ọrụ dijitalụ kwesịrị ekwupụta. Ejiri akụkụ a maka ndị mmepe.
Ndị edemede Akụkụ ebe a ga-enyerịrị ndị na-eme ihe akụrụngwa ụgwọ.
Akwụkwọ ikike maka ngwa ọrụ: Nkebi nke ikikere enyere ndi ozo iji ghagharia ihe dijitalụ.
Akwụkwọ ikike maka akwụkwọ ngwa ọrụ: Akụkụ ebe a ga-ekwupụta ụdị ikikere dị na akwụkwọ edere.
N'ime ndị a ezi omume, ha na-atụ aro ịgbakwunye na AKW fileKWỌ faịlụ faịlụ iji mee ka o zuo ezuo, ngalaba ndị a:
Otu esi enyere aka: Nkebi nke na-akọwa ndi mmepe ohuru usoro iji nye aka na oru.
Usoro akparamagwa: Ngalaba na-akọwa ụkpụrụ omume na-egosipụta ụkpụrụ mmekọrịta, iwu na ọrụ ndị mmadụ na òtù dị iche iche ga-agbaso mgbe ha na ndị ọrụ dijitalụ ma ọ bụ obodo ha na-emekọrịta ihe ọ bụla.
Akara: Nkebi nke na-egosi baajị (obere onyonyo agbakwunyere na README.md) nke eziputara na uzo ogugu na ngwa agha.
Versiondị: Ngalaba na-egosi ndepụta nke nsụgharị nke ngwá ọrụ dijitalụ na arụmọrụ ndị agbakwunyere na ụdị ọ bụla.
Nkwenye: Nkebi nke nwere nkwuputa nye ndi mmadu ma obu ndi otu ndi nyeworo aka n'uzo a.
Iji gbasaa ozi a, na Omume oma n'okwu nke Akwụkwọ maka mmepe nke Software Nwepu, site na "Koodu maka mmepe Initiative" na Bank Inter-American Development Bank ị nwere ike pịa njikọ ndị a: Ihe ederede - Nduzi maka ibipụta ngwaọrụ dijitalụ. Na akwụkwọ ndị ọzọ, anyị ga-enyocha akụkụ na-ezo aka ezi omume na nyocha na ikikere na Free na Mepee Software onwe ha.
Anyị na-atụ anya na esta "bara uru obere post" banyere «Buenas prácticas» n'ọhịa nke «documentación» imepụta mgbe ị na-emepe emepe «Software libre y abierto», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Ezigbo omume iji zụlite sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma mepee: Akwụkwọ
Mmanya 5.0 dị ebe a, na nkwado maka ọtụtụ ngosipụta, Vulkan 1.1 na ndị ọzọ